Kabarin’ny filoha, taon-dasa toy izao : tsy tanteraka ny fanomezan-kasina ny raharaham-bahoaka | NewsMada
Kabarin’ny filoha, taon-dasa toy izao : tsy tanteraka ny fanomezan-kasina ny raharaham-bahoaka
“Tsy hanaiky lembenana ary tsy handefitra aho amin’ny fanaovana mizana tsindrina ila, na ny kiantranoantrano amin’ny raharaham-bahoaka. Toromarika sy baiko mivantana no omeko ny governemanta sy ny mpikambana rehetra ao aminy, ny mpiasam-panjakana rehetra sy ny tomponandraikitry ny Foloalindahy: natao hanompo vahoaka isika fa tsy hotompoina; natao hiloloha ny vahoaka isika, fa tsy natao hanambony tena.”
Kabarin’ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ny lanonam-pifampiarahabana noho ny taona vaovao teny Iavoloha, ny 8 janoary 2016, io. Herintaona lasa izay. Mby aiza ny tanteraka? Kibo mpitsara tena ny mpitondra, fa mitsara koa ny vahoaka.
Eo, ohatra, ny fisian’ny mizana tsindrina ila amin’ireo tsimatimanota sy ny kiantranoantrano amin’ny raharaham-bahoaka, raha tsy hampahatsiahy afa-tsy ny “Raharaha Anjozorobe” sy ny “Raharaha Ambohimahamasina”, misy olona arovan’ny mpitondra; ny “Raharaha Soamahamanina”, iarovany ny vahiny…
Tsy misy izay tatitra ny asa vita… tsy misy
“Tsy handefitra amin’ireo izay manao ny tsy mety aho, ka mandoto sy manivaiva ny hasin’ny firenena malagasy, amin’ny anaran’ny vahoaka malagasy”, hoy izy. Tena nahavita ny asany amin’izay raharaham-bahoaka izay ve ny mpitondra? Tsy mahavery ny hasin’ny firenena ve ny firongatry ny fitsaram-bahoaka tetsy sy teroa noho ny tsy fahatokisana mpitandro filaminana sy ny fitsarana?
“Ary mba tsy hahatompon-trano mihono anareo, hisy fotoana manokana isan-telo volana amin’ity taona ity atokako hilazana aminareo hoe mby aiza izany rehetra izany”, hoy ihany izy. Nisy ve izay fampahafantarana isan-telo volana ny asa vita ny amin’izay tsy fanaovana kiantranoantrano sy mizana tsindrina ila amin’ny raharaham-bahoaka izay?
Tsy afa-mivelatra ny vahoaka… ampihorohoroana lava
“Ny fepetra ahazoan’ny Malagasy mamelon-tena sy mivelatra eo amin’izay sehatra misy azy no andraikitry ny fitondrana. Anisan’izany fepetra izany ny fampivelarana ny sehatry ny fiharian-karena izay miteraka asa, karama, fahefa-manjifa sy mivelatra ara-kolontsaina”, hoy koa izy.
Mby aiza izany, raha tsy hiteny afa-tsy ny “Raharaha Soamahamanina”, ohatra? Na ny famotehana sy fanagadrana izay mitady hihetsika rehetra amin’ny fiarovana ny tanindrazana… Hanao ahoana indray ny kabary, anio?